I-Twitch Prime Free Games - Disemba 2020 - Ukudlala
ITwitch Prime iphethwe yi-Amazon. Sekuyisikhathi eside kuqhuba ubulungu obukhokhelwayo. Uma ungumdlali wegeyimu, udinga ukwazi ukuthi kunemidlalo yamahhala njalo ngenyanga kuTwitch Prime.I-Twitch Prime inika abasebenzisi bayo imidlalo yamahhala ukuyilanda nokugcina nayo inyanga ngayinye.
Ukubhaliswa kweTwitch Prime kufakiwe ne- I-Amazon Prime noma ngisho Ubulungu be-Prime Video . Ngakho-ke, uma ubhalisele kunoma iyiphi yalezi zingxenyekazi, uzodinga kuphela ukuxhumanisa ama-akhawunti akho e-Amazon kanye namaTwitch ukuze ubambe imidlalo yamahhala.
Ukubhaliswa kweTwitch Prime akukutholi nje kuphela kwizinketho zokuxoxa, izithonjana, ukubuka okungenazikhangiso kuziteshi zeTwitch. Kepha, imidlalo yamahhala nayo njalo ngenyanga.
Uhlu lwemidlalo yamahhala yamahhala:
1. Inkanyezi evutha amalangabi
Lona umdlalo wokudubula onomkhumbi-mkhumbi omnandi. Kungukulandelana kwePulstar, okubuye kufakwe nemidlalo yamahhala yale nyanga.Kulomdlalo, udinga ukukhetha phakathi kwemikhumbi-mkhathi engu-6 enamandla ahlukene bese udinga ukujoyina impi engapheli ezokwenzeka phakathi kwamaplanethi iRemuria neMutras.
Udinga ukudlala lo mdlalo ngokudubula phansi izitha zakho ngokudubula okuhlukanisiwe nangokuthatha amandla nezinto zebhonasi.
2. I-Fatal Fury Special
Uma uthanda imidlalo yokulwa ne-retro, khona-ke siyaqiniseka ukuthi uzothandana nalo mdlalo.I-Fatal Fury Special ine-retro vibe nesitayela esiyingqayizivele esisikhumbuza nge-Street Fighter.Lo mdlalo ubuyela emuva ku-1993 futhi ubandakanya nezinhlamvu eziyisishiyagalombili ezivela kuFatal Fury 2.
Imigodi ekhethekile yeFatal Fury Special ezungeze amasosha angama-15 ahlukene.Lo mdlalo usifanele ngempela isikhathi sakho futhi nakanjani uzothanda ukudlala lo mdlalo.
3. UMax: Isiqalekiso Sobuzalwane
UMax ngumdlalo wokuxazulula iphazili ukuze ugcine ubuchopho bakho bukhathazeka ngaphezulu.Lo mdlalo ugcwele izenzo kanye nokuxazulula iphazili yokudala.
UMax uhlome iMarker Marker, kumele abhekane nabo bonke ububi ngaso sonke isikhathi ezweni elihlukile ukuze atakule umfowabo omncane, uFeliksi.
4. INkosi Yezimpi 2002
Lo mdlalo wakhululwa emuva ngo-2002. Uza namasu okubalekela okusheshayo noMax Activation okwenza ukulwa nokuthokozisa nakakhulu.Umdlalo weKing Of Fighters 2002 uncomeka kakhulu emhlabeni wonke.
5. I-Samurai Showdown 2
Lo mdlalo unamasu athile amangalisayo. Amaqhawe ayi-15 abamba insimbi emcimbini osheshayo futhi othukuthele wemikhosi yokubiyela. Ungasebenzisa abalingiswa abasha kanye namaphaphu amasha we-Fury ukuze ungene futhi uthose indlela yakho yokunqoba
Eminye Imidlalo Yamahhala:
Ababhalisile beTwitch Prime bangathola ukufinyelela kumageyimu wamahhala inyanga ngayinye. Eminye imidlalo yilena:
Uthingo LwaThingo Lwesithupha
Ithimba Eliphezulu leFIFA
Izinganekwane Zeselula: Bang Bang
Ungayifuna Kanjani Imidlalo Yamahhala?
Imidlalo eneTwitch Prime ukukhethwa okukhethwe ngesandla kwe- imidlalo yamahhala uthola njalo ngenyanga. Le midlalo itholakala kuphela ngesikhathi esilinganiselwe. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi ubheka emuva njalo ngenyanga ukuthola umdlalo omusha.Uma usufuna umdlalo, uzongezwa kulabhulali yakho futhi uzotholakala kuwe inqobo nje uma une-akhawunti ye-Amazon Prime.Ngeke udinga ukufaka noma yimuphi umdlalo uze ungakulungeli ukuwudlala.
Ukufuna umdlalo wamahhala, mane uvule isiphequluli sakho bese uya ekhasini le-Twitch Prime loot. Skrolela phansi kumageyimu nge-Prime section bese uchofoza ku-Mangalela ngaphansi kwawo wonke umdlalo ofuna ukuwengeza kulabhulali yakho.Usuqedile lapha. Khumbula ukuthi ngaphambi kokudlala noma yimuphi umdlalo, udinga ukulanda futhi ufake noma ngabe uhlelo lokusebenza lweTwitch desktop noma i-Amazon Games.
Amalungu e-Amazon Prime anokufinyelela emidlalweni yamahhala. Uma usebenzisa iTwitch, ungadlala imidlalo ekhethekile mahhala mahhala inyanga ngayinye. Ungathola imidlalo yamahhala futhi ungathola nezinto ezingaphakathi kwegeyimu njengamaphakethe we-booster, izikhumba, nokunye okuningi njalo ngenyanga.
Njengomdlali wamageyimu, nakanjani uzothanda iTwitch Prime ngenxa yayo yonke imidlalo yamahhala enikeza abasebenzisi bayo. Ungamane ufune umdlalo wamahhala bese uwulanda ngokuhamba kwesikhathi noma kunini lapho ufuna ukudlala umdlalo.
I-NordVPN Netflix - Manje Buka Ngaphandle kwe-USA kalula!
Ama-Movie Ahamba Phambili Ama-50 Okubukwa Ku-Prime Video
kanjani i-dm ku-instagram app
bukela ukukhishwa kwe-movie okusha ku-inthanethi
amazon prime student vs prime
I-watch32 ama-movie agcwele mahhala ku-inthanethi
i-psn code generator yamahhala ku-intanethi